Nke a bụ otú OnePlus 7T si ele akụkụ niile + + Video-render] | Gam akporosis
Nke a bụ otú OnePlus 7T si ele akụkụ ya niile anya + + Ihe na-eweta vidiyo]
N’oge na-adịghị anya, anyị ga - anata ọkọlọtọ ọhụụ ọhụrụ nke OnePlus, nke ga - esonyere ọgbọ abụọ nke ụlọ ọrụ nke asaa nke ụlọ ọrụ ahụ, bụ ndị OnePlus 7 y 7 Pro. Ebumnuche abụọ a ghọrọ ọrụ gọọmentị n'oge na-adịbeghị anya, n'etiti ọnwa Mee nke afọ a, n'ezie, na, kemgbe ahụ, a matala ha dịka otu n'ime smartphones kachasị mma nke afọ a, agbanyeghị na ọ akabeghị.
Onye na-emepụta China ga-agbakwunye ụdị abụọ ga-anọchi anya ndị a n'oge na-adịghị anya. Ruo ọtụtụ izu anyị maara na aha ha ga-abụ otu, mana na mgbakwunye, nke ga-abụ leta "T" na nọmba ọnụọgụ. Ya mere, ha dị ka nke a: OnePlus 7T na 7T Pro. Ma ezu nke iti gburugburu ohia; ihe anyị na-ekwu okwu banyere ohere ọhụrụ a bụ imewe nke ihe atụ mbụ na nke a kpọtụrụ aha, ọ dịkwa ekele a vidiyo ọhụrụ nke pụtaworo, nke a na-ahụ ihe ịchọ mma niile, yana n'akụkụ ya niile.
Ihe nkiri vidiyo nke OnePlus 7T na anyị kpọgidere dị n'okpuru kere site OnTheaks na mmekorita ya na AhịaBaba. N'ime ya anyị nwere ike ịmasị ọdịdị zuru oke nke ama ama a, na-enweghị funahụrụ ihe ọ bụla.
Dị ka o kwere omume ịdebe, OnePlus 7T nwere ihe eji eme ihe na nke OnePlus 7, ma ọ bụrụ na ọ tụgharịa ghara ịbụ otu ihe ahụ dị ka nke ikpeazụ. Otú ọ dị, anyị enweghị ike ikwu otu ihe ahụ gbasara ngalaba azụ; e nwere ọ na-egosi a Atọ igwefoto nchọ ọnụ na ikanam flash na a okirikiri ụlọ na a nnọọ pụtara ìhè "X" imewe. N'okpuru ebe a, akara ụlọ ọrụ ahụ dị na onye na-agụ akwụkwọ mkpịsị aka na-ahụ anya site na enweghị ya, nke na-egosi na usoro ihe biometric ga-aga n'ihu na-abanye n'ime ihuenyo ahụ.
Ngwaọrụ nwere naanị otu grid na ala, kama nke abụọ dị ka OnePlus 7. Ogwe SIM dị ugbu a na ala, na-abụghị ọdụ ụgbọ USB-C, ebe akụkụ aka nri nke etiti ahụ na-etinye bọtịnụ ike na ihe mmịfe njikere na aka ekpe bụ njikwa olu ụlọ. The akụkụ nke ekwentị na-nyere dị ka 161,2 x 74,5 x 8,3 millimeters.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nke a bụ otú OnePlus 7T si ele akụkụ ya niile anya + + Ihe na-eweta vidiyo]
Sọpụrụ 20 ọkọkpọhi emelitere na July nche kwachie na usoro kwụsie ike ndozi